Andry Rajoelina - Ntsay Christian : Mitovy toetra…! -
AccueilRaharaham-pirenenaAndry Rajoelina – Ntsay Christian : Mitovy toetra…!
17/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Namoaka fanambarana mikasika ilay loza teny Ivandry ny praiminisitra Ntsay Christian. Tsy nisy fialan-tsiny na kely akory aza, loza aza mbola mihevitra ny tenany ho manana ny marina…
Mivandravandra eo imasom-bahoaka tokoa ankehitriny ny toetran’ny manam-pahefana eto amintsika, taorian’iny lozam-pifamoivoizana nitranga teny Ivandry ny zoma lasa teo iny. Ny “sécurité”-n’ny praiminisitra Ntsay Christian hono no zava-dehibe voalohany indrindra, araka ny fanambaran’ity lehiben’i Mahazoarivo ity, nalefan’ny sampandraharaha misahana ny seraseran’i Mahazoarivo tamin’ny mpanao gazety.
Natao hiaro vahoaka vahoaka ny mpitondra, fa tsy hamono vahoaka amin’ny alalan’ny fanamparam-pahefana. Fanamparam-pahefana foana no dikan’ireny fihetsika nasehon’ny praiminisitra Ntsay Christian tamin’ny zoma hariva ireny. Izay elanelana kely hatreo amin’ny “rond point” miakatra an’Alarobia ve dia handehanana mafy amina “sens unique”, amin’izay indray ‘ndeha hamonjy fodiana! Tsy vitan’izany fa mbola ny praiminisitra Ntsay Christian indray no mihevitra ny tenany ho manana ny marina, ary mandatsa ireo ankizy voadona tamin’ny alalan’ilay fanambarana, na “communiqué” voarain’ny mpanao gazety.
Mitovy toetra tanteraka tokoa ny praiminisitra Ntsay Christian sy Andry Rajoelina, samy mpanadio tena. Nahavita niteny teo imason’ny mpianatra “Science Po” ity “putschiste” ity, fa ny tenany hono no niady tamin’ny fanondranana “bois de rose” nandritra ny Tetezamita, ary tsy nanongam-panjakana izany velively hono izy. Tsy mahagaga raha i Ntsay Christian no natolotr’i Andry Rajoelina ho praiminisitra satria olona mitovy toetra. Ny tenany izay nandika lalàna, nanarao-pahefana indray no mihevitra ny tenany ho manana ny rariny nanoloana iny lozam-pifamoivoizana iny. Ny mponina eny Alarobia aza efa vaky vava mihitsy, ny amin’ny fihetsik’ity praiminisitra ity amin’io mandeha “sens unique” lava io. Adinon’i Andry Rajoelina sy Ntsay Christian fa tsy olom-boafidy izy ireo, fa mpanongam-panjakana sy olom-boatendry.
Hentitra ny fanazavan’ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina mahakasika ny fanampiana avy amin-dry zareo Sinoa. « Tsy fahalalana ny tontolon’ny fitantanam-bola iraisam-pirenena sy ny toekarena eran-tany ny filazana fa « financement parallèle” ny fanampiana avy amin’i Sina », hoy ny ...Tohiny